Masontsivana Mpisolovava, Kajy Ny Saram Nanoritra Ny Saram-Ny
Fampiharana izany dia simulator ho amin’ny kajy ny fanafoanana saram-pitsarana, nanoritra amin’ny resaka heloka bevava, mifototra amin’ny masontsivana ny asa fanompoana, fehezin’ny DM recante: ‘tapa-Kevitra ny masontsivana ny ponenana ny compensations ho an’ny asa ara-dalàna nanaraka ny zava-kanto. telo ambin’ny folo andininy enina ny lalàna amby telo-polo voalohany desambra roa-polo roa ambin ny folo n, nohavaozina ny DM n.
Ny DM no navoaka tamin’ny fomba Ofisialy Journal tsy misy. -ny roa efatra, ary dia manan-kery avy ny telo-efatra. Ho an’ireo izay mila mampiasa ny antitra fangatahana, mifototra amin’ny DM- taona, azo jerena ao amin’ity rohy ity. Ny fangatahana fanavaozana ny fototry ny DM n. fito amby telo-polo ny valo telo taona navoaka tao amin’ny G. U. n. ny efatra amby roapolo-taona ary amin’ny hery avy any amin’ny fito amby roa-polo tamin’ny volana aprily taona. Fampiharana (Art, DM) Ny lalàna no mifehy. ny masontsivana ny fanonerana ny mpahay lalàna, rehefa amin’ny fotoana fanendrena na ny taty aoriana, ny tambin-karama dia tsy mbola tapa-kevitra an-tsoratra, ao amin’ny tsirairay raha tsy tapa-kevitra ny marimaritra iraisana izany ihany, anisan’izany ny petra-kevitra ny fanafoanana ary koa ny zava-bitany eo amin’ny mahaliana ny antoko fahatelo, na ny fampisehoana officiose nomen’ny lalàna, tsy misy fitsarana an-tendrony — na dia ao ny raharaha ny fanapahan-kevitra ny fifanekena momba ny onitra — ny fitsipi-pifehezana ny fanonerana ny fandaniana. Fanonerana: Ny onitra voalaza ao amin’ny afovoany tsanganana ‘eo ho eo ny soatoavina’ ny soatoavina voarakitra ao amin’ny filankevitry ny minisitra ny latabatra (ao amin’ny didim-panjakana mampiasa ny teny hoe ‘salam soatoavina’). Ny ambany indrindra sy ny ambony indrindra ny soatoavina dia azo avy amin’ny fampiharana ny ‘eo ho eo ny soatoavina’ ny fanafoanana, ny fiovana ao mitombo sy mihena araka ny voalaza ao amin’ny art, amin’ny andinin-tsoratra voalohany ny DM. Koa izany no nampahatsiahy ny DM, aiza ny fampiasana ny teny hoe ‘mpanapaka’, izany dia manome ny mitombo sy mihena ny toetra amam-panahy tanteraka tsy manan-kery, ny foto-kevitra dia nanamafy imbetsaka ao ny fanazavana memorandum ny minisitra. Ao amin’ny tsanganana ‘saran’ny’ ianao dia afaka miditra dia be ny fomba amam-panao, amin’ny soatoavina izay mety hihoatra ny thresholds voalaza. Ny fifantenana ny ny soatoavina recalculated (ambany indrindra, antonony, ambony indrindra) dia manindry ny hafa vola tanana niditra. FANAMARIHANA: tsy toy ny masontsivana, amby roa-roa ambin’ny folo dia tsy nampoizina ny onitra fandaharam-potoana ho an’ny mpanatanteraka dingana. Mampitombo sy ny Fihenan’ny: Ny grid mampitombo sy ny fihenan’ny fomba amam-panao mitaratra tena andrasana avy amin’ny DM izay mamela anao hampitombo na hampihena ny onitra eo amin’ny fototry ny manokana ny toe-piainana (ohatra: mitombo ny isan’ny faritra, ny fampihenana ny maimaim-poana fanampiana ara-dalàna, sns.).
Isan’ny Faritra: Ny M
D. mametraka ny fitsipika mba hamaritana ny ambony indrindra isan-jato ny fitomboana ny saran’ny momba ny isan’ny faritra na ny fiampangana. Ny fomba toy izany koa ny kajy dia mihatra ihany koa amin’ny tranga izay ny mpisolovava miaro ny olona manohitra ny maro ny antoko, toa ny fanomezana tsy mitarika ny fandinihana izany zava-misy toe-javatra sy ny lalàna. Ao amin’ny fizarana ny vidiny mitombo, dia takiana avy eo ny Isan’ny faritra arovana manohitra ny hetsika mamelabelatra ny ho faty (default), mba hitovy tonga dia ny hampitombo ny ambony indrindra amin’ny ny mifanaraka amin’izany ny mpampiasa dia mbola manana ny fahefana napetraka ambany isan-jato. Bebe kokoa Tombana: an-tsaha Ity dia mamela anao haneho ny endriky ny isan-jaton’ny ny subjective fanombanana ny asa fanompoana nomen’ny (indrindra indrindra, ny be pitsiny, hamehana, ny maha zava-dehibe, vokatra, etc.) ao anatin’ny fetra nametraka ny didim-panjakana (art, paragrafy). Mba hijanona ao anatin’ny ireo fetra ary noho izany, dia soso-kevitra hampihatra izany fiovana izany ny eo ho eo ny vola. Ny fiovaovana voalaza dia ampiharina ny habetsaky ny latabatra ny fitambarany, sy ny saran’ny ka nitombo dia ho ampiasaina ho toy ny fototry izay kajy izay mampitombo na ny fihenan’ny takiana amin’ny hafa andinin-tsoratra ny didim-panjakana. Mazava ho azy, ny subjective fanombanana atao ihany koa ny azo aseho amin’ny alalan’ny fisafidianana ny soatoavina-ny ambany indrindra, ambony indrindra, na milaza, toy ny hoe, ny fanonerana ny ‘fomba amam-panao’ ny tsanganana ‘saran’ny’ isaky ny dingana. Fandaniana afa-Miala amin’izany: Amin’ny an-tsaha ity ianao dia afaka maneho ny fandaniana izay afa-miala amin’izany, i.e. ny vola lany taxable mifandray vola aloa mialoha ao ny anarana sy ny tantara ny mpanjifa nandritra ny vita ny asa nampanaovina azy (eks: hajia, na zo). Ireo fandaniana tsy mandray anjara amin’ny fananganana ny taxable fototra omena izy ireo manokana ny tahirin-kevitra tia ny faktiora tamin ny mpanjifa. Saran-dàlana: fomba fikajiana ny saran-dàlana ho nametraka teo amin’ny zava-kanto. dimy ambin’ny folo sy fito amby roa-polo ny lalàna. Amin’ny fanonerana ny saran-dàlana incurred eo amin’ny fanatanterahana ny asa no foto-kevitra mitovy amin’ny fitsipika mifehy ny hetra ny onitra, na inona na inona ny fomba fikajiana (fisaka ny tahan’ny na ny any amin’ny faran’ny lisitra). Ny vola niditra any an-tsaha ity dia ho heverina ho ny fandaniana nahavaky tratra ny rehetra ny vokany. Amin’ny ankapobeny ny fandaniana: Ireo fandaniana, antsoina koa hoe fisaka ny tahan’ny vola lany, dia napetraky ny lalàna, ny halehiben’ny raikitra ny dimy ambin’ny folo amin’ny lafiny iray hafa, koa ny tranga izay ny onitra dia nanaiky ny mpanjifa (art.). Isika anefa dia nisafidy ny hamela ny mety ho fiovana izany isan-jato ho misy mila. Noho ny fahafenoana tsaroantsika ihany koa fa amin’ny ankapobeny ny fandaniana, izay efa nofoanana avy DM taona, dia aza mba nampidirina ny lamina vaovao, nanoritra (jereo namoaka lahatsoratra). Ny fitaovana ny Lalàna dia: na dia eo Aza ny maha-toy izany norafetiko fampiharana ny fanapahan-kevitra ny karama ny ‘fanafoanana ny fitsarana’ izany, dia azo atao ny hampiditra ao amin’ny prospectus ny antsoina hoe accessories ny lalàna, izany hoe ny VAT sy ny sarany ho an’ny fisotroan-dronono tahirim-bola ho amin’ny asa. Mba hampavitrika ny safidy roa, dia tsindrio ny bokotra mba Ahitana ny fitaovana. Samy safidy dia tonga dia voafaritra nefa dia azo atao ny mandray andraikitra eo amin’ny tsirairay cecubi tsy miankina. Hiverina eny amin’ny fotoana ny fitaovana ao amin’ny lalàna, indray tsindrio eo amin’ny bokotra iray ihany. Misy ihany koa ny safidy, mba ho tafiditra ao amin’ny prospectus ny fanafoanana ny mihazona ny hetra. Ny isa ny soatoavina: Ny fanaovana kajy ihany koa ny mandray vola vola amin’ny arivo separator, na dia ialohavan’ny euro mariky. Izany endri-javatra dia afaka ny ho ilaina, ohatra rehefa manao dika-petaka ny isa soatoavina izay efa format toy ny vola. Farany, aoka ho marihina fa tsy maintsy atao ny mampiasa foana ny teny malagasy toy ny separator ny decimal isa. Isika tatitra eto ambany ny lisitry ny mampiavaka ny asa mifandray amin’ny ny isan ‘ny endriny samy hafa isehoan’ny’, araka ny voalaza ao amin’ny art, andalana. Ny fandinihana sy ny fandalinana ny asa, ny fanaraha-maso ny toerana, ny voalohany fikarohana ny antontan-taratasy, ny hanontaniana ny hevitry ny mpanjifa, ny mpiara-miasa aminy na mpanoro-hevitra, ny tatitra na ny heviny, tsoratra na am-bava, fa mihavitsy ny asa sy ny natao ny andro mialoha ny dingana nanomboka. Ny asan’ny apôstôly, ny fampidirana izay dia tratran’ny, nametraka fitarainana, ohatra, ny fangatahana, ny fanambarana, oppositions, ny antso, ny antso, ny fitalahoan’ny, ny fidirana an-tsehatry an-tompon’andraikitra ary ny quote ny madio. Fangatahana, mpanoratra, ny fandraisana anjara na fanampiana mifandraika amin’ny asa sy ny asa vonjimaika ny fomba fanatanterahana ny fitsarana dia nanomboka ihany koa ny natao amin’ny fakàna ny hevitry ny vahoaka na ao amin’ny biraom-efitra, izay asany ny fikarohana ho an’ny midika hoe fitsapana, ny fiofanana fitsapana, ao anatin’izany lisitra, fiampangàna ary mifandray amin’ny fampahatsiahivana, ny fandinihana ny mpanolo, vavolombelona, voampanga na ny miampanga olona ny fandikàn-dalàna mifandray na tsy mifandray. Am-bava ny tohan-kevitra na ny mpanoratra, ny replicas, ny fanampiana ny fifanakalozan-kevitra amin’ireo antoko hafa mikasika ny fitsarana na any amin’ny efi-trano ny filan-kevitra amin’ny fivoriana azon’ny rehetra natrehana